काठमाडौं । युएईमा जारी आईपीएल क्रिकेट अन्तर्गतको आफ्नो १२ औं खेलमा किंग्स इलाभेन पन्जाबले छैठौं जित हात पार्दै चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । पञ्जाबले सोमबार राति सम्पन्न खेलमा कोलकाता नाइटराइडर्सलाई ८ वि ...
चितवन । चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा दशैंका क्रममा पनि काम नरोकिने भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउ ...
युएई । चेन्नई सुपर किंग्सले जारी आईपीएलमा आठौं हार ब्यहोरेको छ । शुक्रबार राती सम्पन्न खेलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग १० विकेटको हार ब्यहोरेको चेन्नाई जारी आईपीएलको अंक तालिकामा पुछारमा रहेको छ । चेन ...
काठमाडौं । नरहरीपुर कराते डोजो मच्छेगाउँका सोनिम मानन्धर पुरुष तर्फ र सञ्जु देशार प्रथम जेकेए यु १९ ई (अनलाईन) काता कम्पिटिशनमा स्वर्ण हात पारेका छन् । जुनियर कराते एकेडेमीको आयोजनामा भएको अनलाई ...
आइपीएल: पञ्जाब र कोलकता सुपर ओभरमा विजयी, आज चेन्नई र राजस्थान भिड्दै
युएई । युएईमा जारी तेह्रौं आइपीएल क्रिकेटमा किंग्स ११ पञ्जाबले मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गरेको छ । दुबई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा मुम्बईले दिएको १ सय ७७ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पन ...
युएई । युएईमा जारी रहेको तेह्रौं संस्करणको आईपीएल २०२० अन्तर्गतको आफ्नो आठौं खेलमा साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । आबुधाबीमा शुक्रबार राति भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ...
युएई । नेपाली स्टार खेलाडी सन्दीप लामिछाने आबद्ध रहेको दिल्लीले यस आइपीएलमा शानदार खेल खेलिरहेको छ । जसलको फलस्वरुप जारी आईपीएलमा छैटौं जित हात पार्दै दिल्ली क्यापिटल्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । दुब ...
दिल्लीविरुद्ध मुम्बईको जीत, समान अंकका साथ मुम्बई शीर्षस्थानमा
युएई । युएईमा जारी १३ औं संस्करणको आईपीएलको सातौं खेलमा साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले राम्रो लयमा देखिएको दिल्ली क्यापिटल्सलाई पराजित गर्दै आईपीएलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । अबुधाबीमा आइतबार राति ...
आईपीएल २०२०ः रोमाञ्चक खेलमा पञ्जाबविरुद्ध कोलकत्ता विजयी
युइई । युएईमा जारी १३ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा कोलकत्ता नाइट राइडर्सले चौंथो जित निकालेको छ । आबुधाबीमा शनिबार भएको रोमान्चक खेलमा किङ्स इलाभेन पन्ज ...
आईपीएल २०२०ः राजस्थानविरूद्धको शानदार जितपछि दिल्ली शीर्षस्थानमा
युएई । युएईमा जारी आईपीएलको अंक तालिकामा दिल्ली क्यापिटल्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । यूएईको सारजाहमा शुक्रबार राति भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सलाई ४६ रनले पराजित गर्दै दिल्ली शीर्ष स्थानमा उक्ल ...
आइपीएलमा सन्दीपको दिल्ली शीर्षस्थानमा, आरसिबीविरुद्ध ५९ रनको जित
युएई । युएईमा जारी १३ औं संस्करणको आइपीएलमा नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आबद्द दिल्ली क्यापिटल्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । सोमबार राति भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरलाई ५९ रनले पराजित गर्दै ...
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा चेन्नाई सुपर किंग्सले १० विकेटको शानदार जित हासिल गरेको छ । भारतीय पूर्वकप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा सुरु ग ...
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा खेलकुदकर्मी पनि प्रभावित भएका छन् । यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव अशोक ...
आईपीएलमा कोलकाताको पहिलो जित हुँदा राजस्थानको पहिलो हार
युएई । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा कोलकाता नाइट राइडर्सले राजस्थान रोयल्सलाई पराजित गरेको छ। लगातार दुई खेल जितेर शीर्षस्थानमा रहेको राजस्थानमाथि कोलकाताले बुधबार ३७ रनको जित पार्‍यो। १ सय ७ ...
काठमाडौं । युएईमा जारी आईपीएलको तेह्रौं संस्करणको आप्mनो तेस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स पराजित भएको छ । लगातार तेस्रो खेल जित्ने अभियानका साथ मैदानमा उत्रिएको नेपाली सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम दिल्ली ...
दुबई । आईपीएल २०२० को दशौँ खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले मुम्बइ इन्डियन्सविरुद्ध सुपर ओभरमा जित हासिल गरेको छ । टस हारेर ब्याटिङ गरेको रोयल बेंग्लोरले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुम ...
काठमाडौं । स्टार नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम दिल्ली क्यापिटल्सले जारी १३ औं आईपीएल टी–ट्वान्टीअन्तर्गत शुक्रबार आफ्नो दोस्रो खेल खेल्दैछ । युईएस्थित दुबई रंगशालामा साँझ पौने ...
काठमाडौं । कप्तान केएल राहुलको विस्फोटक ब्याटिङसहित जारी आईपीएलको आफ्नो दोस्रो खेलमा पञ्जाबले शानदार जित हात पारेको छ । बिहीबार राती भएको खेलमा पञ्जाबले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरलाई ९७ रनले पराज ...
युएई । जारी १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको आप्mनो पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्सले जित हात पारेको छ । मंगलबार राति युएईको सारजाह क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा चेन् ...
यूएई । साविक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्सले १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ । यूएईको अबुधाबीमा शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा साविक ...
पौडीबाज नयनासँगै उनका पति र छोरालाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । पौडीवाच नयना शाक्यलाई कोरोना भाईरसको संक्रमण देखिएको छ । आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदको स्वर्ण विजेता एवं नेपालको तर्फबाट ओलम्पिकमा खेलेकी नयनासँगै उनको परिवारका सदस्यलाई समेत कोरोना देखिएको ...
ट्रिनिटाड । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)तर्फ लागेका छन् । उनी क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) सक्काएर शनिबार युएईतिर लागेक ...
नेयमार कोरोनामुक्त, अभ्यासमा फर्किए
पेरिस । विश्व फुटबल एवं ब्राजिलका स्टार फुटबलर नेयमार कोरोना मुक्त भएका छन् । फ्रान्सेली क्लब पिएसजीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका नेयमारलाई १० दिन अघि कोरोना पुष्टी भएको थियो । उनले ...
पहिलो सेमिफाइनल जमैका र ट्रिन्बागोबीच साँझ पौने आठमा सुरु हुने ट्रिनिटाड । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा सन्दीप लामिछाने आबद्द जमैक ...
सन्दीपको एक विकेट बाबजुद जमैका पराजित
काठमाडौं । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)मा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध टोली जमैका तल्लावाह फेरि पराजित भएको छ । शुक्रबार राति सम्पन्न खेलमा जमैका बार्बाडोस ट्रीडेन्टससँग जमैका ७ ...
सिपिएलमा सन्दीपको नवाैं खेल अहिले राति १२ बजे सुरू हुँदै
काठमाडौं । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपीएल) अन्तर्गत सन्दीप लामिछाने आबद्ध जमैका तालवाजले आफ्नो नवौँ खेल आज राति खेल्दै छ । ट्रिनिडाडस्थित ब्रायन लारा रंगशालामा जमैकाले नवौँ खेल बार्बाडोस ट्रिनिडाडवि ...
टेबल टेनिस खेलाडीको कोरोना बिमा गरिदिँदै प्रशिक्षक दुलाल
काठमाडौं । प्रशिक्षक राजेन्द्र दुलालले १२ जना टेबल टेनिस खेलाडीको कोरोना बिमा गरिदिने भएका छन् । सशत्र प्रहरी बल (एपीएफ)का प्रशिक्षक दुलालले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा विभागीय टिम एपी ...
स्टार खेलाडी नेयमारलाई कोरोना संक्रमण !
पेरिस । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) एवं ब्राजिली स्टार खेलाडी नेयमारलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । पीएसजीका नेयमारसहित एन्जल डी मारिया र लियोनार्दो परेडेसलाई पनि कोरोना संक्रमित पुष्टी भएको क् ...
सन्दीपको जमैका तलाबाजको चौथो हार, प्रतियोगितामा सन्दीपको १० विकेट
ट्रिनिटाड । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको टिम जमैका तलाबाजले चौथो हार व्यहोरेको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा ट्रिनबागो नाइ ...
सन्दीपको २ विकेटसँगै सीपीएलको छैठौं खेलमा जमैकाको तेस्रो जित
ट्रिनिटाड । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) अन्तर्गतको अहिले बिहान सकिएको खेलमा सन्दीप लामिछानेको टिमले जित हात पारेको छ । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सहभागी जमैका तलावाज र सेन्ट किट्स एण्ड ने ...
सिपिएल क्रिकेटः सन्दीपको फिफायती बलिङसँगै टिमको दोस्रो जित
काठमाडौं । नेपालका खेलाडी सन्दीप लामिछाने आबद्ध रहेको जमैका तलावाजले आप्mनो चौथो खेलमा जित हात पारेको छ । टस जितेर गुएना अमेजन वारियर्सलाई बलिङ गराएको जमैकाले गुएनालाई २० ओभरमा १ सय ८ रनमा सीम ...
सिपीएल क्रिकेटः सन्दीपको चौथो खेल बुधबार बिहान
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी ट्वान्टी क्रिकेटअन्तर्गत आफ्नो चौथो खेल बुधबार बिहान खेल्दैछन् । ट्रीनिडाड एन्ड टोबेगोमा जारी सीपीए ...
च्याम्पियन लिगः बायर्न म्युनिखलाई उपाधि, पीएसजी उपविजेता
पोर्चुगल । जर्मन च्याम्पियन बायर्न म्युनिख यूईएफए च्याम्पियन्स लिग च्याम्पियन बनेको छ। सोमबार बिहान सम्पन्न खेलमा फ्रान्सेली च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) लाई १–० गोल अन्तरले परा ...
च्याम्पियन लिग उपाधिका लागि बायर्न र पीएसजीको भीडन्त पक्का
पोर्चुगल । बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । जर्मन क्लब बायर्न बुधबार राति पोर्चुगलको लिस्बनमा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा फ्रेन्च क्लब लियोनलाई ३-० गोल अन्तरले पराजित गर्द ...
सीपीएलको पहिलो खेलमा सन्दीपले लिए १ विकेट
काठमाडौं । सन्दीप लामिछाने रहेको जमैका तलावाजले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको पहिलो खेलमा एक विकेट हात पारेका छन् । सेन्ट लुसिया जोउक्ससँगको खेलमा खेलको १४ औं एवं आफ्नो ...
भारतका 'सबभन्दा सफल' धोनीको सन्यास, कप्तानका रूपमा १० बेजोड निर्णय
बीबीसी २०७७ भदौ १ गते
भारतीय क्रिकेट खेलाडी तथा पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट शनिवारदेखि सन्यास लिएका छन्। उनले इन्स्टाग्राममा सन्देश पोस्ट गर्दै त्यस्तो घोषणा गरेका हुन्। भारतीय क्रिकेटका सब ...
भारतीय दुई स्टार क्रिकेटरद्वारा सन्यासको घोषणा
नयाँदिल्ली । भारतीय दुई स्टार क्रिकेटरले सन्यास लिएका छन् । भारतलाई हरेक फर्मम्याटको क्रिकेट उपाधि दिलाएका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् । उनले ...
पोर्चुगल । यूइएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वाटर फाइनलको खेलमा स्पेनिस महारथी बार्सिलोनाले लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ । शनिबार बिहान भएको खेलमा जर्मन क्लब वार्यन म्युनिखले बार्सिलोनालाई ८–२ ...
बायर्न म्युनिखलाई २०औँ जर्मन कप फुटबल उपाधि
काठमाडौं । बायर्न म्युनिखले २०औँ पटक जर्मन कप फुटबलको उपाधि जीतेको छ । शनिबार राति भएको फाइनलमा बायार लेवरकुसनलाई ४-२ गोल अन्तरले हराउँदै बायर्नले लगातार दोस्रो तथा समग्रमा २०औँ पटक उपाधि जीतेक ...
ब्राजिलमा चार अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीमा कोरोना संक्रमण
रियो दी जेनेरियो । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट ब्राजिलमा चार जना अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी पनि सङ्क्रमित भएका छन् । सङ्क्रमित खेलाडीहरुको नामावली सार्वजनिक नगरिए पनि उनीहरुलाई ...
भक्तपुर । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले भक्तपुरमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ । भक्तपुरमा कायम रहेको निवर्तमान समितिले एन्फाको नियमअनुसार काम गर्न नसकेको र समिति समेत दर्ता गर्न नसकेको कारण एन्फाक ...
सागर थापासहित ६ खेलाडीलाई सर्वोच्चको 'क्लिन चिट'
फाइल फोटो । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको अभियोगमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान सागर थापासहित सबै खेलाडीलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतकै फैसला सदर गर्दै मंगलबार सर्वोच्चले ...
काठमाडाैं । सबलाई थाहा हुनसक्छ भीभीएस लक्ष्मण भारतका चर्चित क्रिकेट खेलाडी हुन्, जो अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा भारतका लागि प्रायः निर्णायक बन्ने गर्दथे, तर उनै लक्ष्मण एमबीबीएस डाक्टर हु ...
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफ्नो स्थापना दिवसमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेन । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा पनि लकडाउन भएपछि एन्फाले आफ्नो स्थापना दिवसमा कु ...
विश्वकप क्रिकेट फाइनलमा 'म्याच फिक्सिङ' !
इस्लामाबाद । सन् १९९९ क्रिकेट विश्वकप फाइनलमा ‘म्याच फिक्सिङ’ भएको पाकिस्तानी पूर्व खेलाडीले आरोप लगाएका छन् । तत्कालिन पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान वसिम अक्रमविरुद्ध आरोप लगाउँदै पाकिस्तानक ...
चितवन । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण भरतपुर क्रिकेट क्लबका अध्यक्ष एवं नेपाल क्रिकेट संघ बागमती प्रदेशका कोषाध्यक्ष अनिल अधिकारी अस्ट्रेलियामामा अलपत्र परेका छन् । नेपाली क्रिकेटको प्रचार ...
कास्की । नेपाल खेलकूद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा यही वैशाख २१ गते विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन तय भएको पाँचौं संस्करणको ‘पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड’ स्थगन गरिएको छ । विश्वव्यापी महा ...
भिडियो गेममा व्यस्त धोनीको खुट्टाको औंला साक्षीले टोकेपछि...
मुम्बइ । भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको धर्मपत्नी साक्षीले धोनीको औंला टोकेको फोटो भाइरल भएको छ ।उक्त फोटो साक्षी आफैले आइतबार इन्स्टाग्रामबाट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सुतेर भि ...